उसले लक्ष्मण रेखा टेक्यो – KathaHamro
Subhechchha Bhandari Blog, Uncategorised, writing	3
तयारी बेजोडले भैरहेको थियो । अस्ती हेरेको बिहे भन्दा निकै बेजोड । लेक्साइडमा कृस्टमस आउँदा जस्तो झिलिमिली । अनि राता र सेता बेटारिएका जस्ता पर्दा । बारान्डबाट हेर्दा खुबै रमाइलो देखिएको थियो बिहे घर । “खर्च टन्नै गरेछन् । हुन त गुरुङ गाउँ अनि लाहुरेको घर । गाउँ घर तिर यस्तै हो मिस । हुने खानेले अलिअली झिलिमिली त देखाउनै पर्‍यो नि ।”, बिहान ८ बजेको क्लास भ्याएर खाना खाँदै गर्दा एउटा विद्यार्थी छेउमा आएर भन्यो । मनमनै सोचेँ मानिसलाई आफ्नो इज्जतको कति चिन्ता छ । अरुले बनाइदिएको इज्जत रुपी ऐनमा मानिस आफुलाई हेर्छ र मुल्यान्कन गर्छ कि उ यो समाजमा अरुको माझमा काध मिलाएर उभिन लायक छ कि छैन । तर उ अनविज्ञ छ कि जुन दिन ति अरुले त्यो ऐना फुटालिदिनेछन् उसको अस्तित्व त्यही ऐनासँग टुक्रीएर जानेछ । आखिर कती कमजोर छ मानिस । आफै भित्र आजाद उडान भर्न, यो समाजका फलामे हथकडिबाट मुक्त भई बाच्न चाहने स्वतन्त्र चरिलाई हेर्ने चेस्टा नै गर्न सक्दैन उ ।
३ गते शुक्रबार ।साढे २ बजे प्युन दाइले टिनिनिनी घन्टी बजाइदिनुभयो । कक्षाकोठाबाट निस्किएर सिधै स्टाफ रुममा गए । सबै सर मिसहरु सधाको जस्तै आ-आफ्नो कुर्चिमा । मुसुक्क हाँस्दै म पनि चुप लागेर गएर आफ्नै कुर्चिमा बसे । आफ्नै अगाडीको टेबुलको माथि राखिएको रातो “हार्दिक निमन्त्रण” लेखिएको कार्ड खोलेर हेरेँ । ३ गते प्रितिभोज । बिहे र भोजमा जाँदा वाक्क र समय बर्बादी मान्ने मन त्यो दिन प्रफुल्ल भयो । आँखा अगाडी पुलाउ र मासु घुम्न थाल्यो । हुनपनि मासु नखाएको पनि एक महिना बढी त भएको थियो । सदा सुस्तो र मिठो बोल्ने हेडसरको बोली त्यो दिन अझ बढी मधुर लाग्यो । जिस्काउँदै भन्नुभयो, “ल मिस आज त तपाईंकै घर तिर खाने निम्तो छ । सबै उतै जान पर्‍यो अब ।” पुलाउ र मासुलाई सम्झँदै मैलेनी हाँसो कै पारामा उत्तर फर्काएँ, “हजुरहरु आउनुहुन्छ भनेर त तेत्रो भोज राखिछु । जानै पर्‍यो नि ।”एकछिन पुरै स्टाफ रुम नै त्यो चुट्किलपूर्ण अन्तरकृयामा सामिल हुँदै मुस्कुरायो ।
एकछिन त लाग्यो कुकुर पाल्न मन लाग्यो भन्दा भन्दा कुकुरको सुँघ्ने शक्ति ममा आएछ कि । टाढै बाट नाकले मासुको गन्ध टिप्यो । नजिक पुग्दा देखेँ मै बस्ने धन्सारको दाँया पट्टिको गर्‍हामा एउटा ठुलो टेन्ट अनि त्यो टेन्ट मुनी थुप्रै टल्किएका कुर्ची । अनि त्यही गर्‍हाको दुइ गर्‍हा मुनी सानो टेन्ट अनि त्यस मुनी केहि थोरै कुर्ची । आहा!!!! तयारी त बेजोड नै हो सोचेँ ।जता मन भए तेतै बस्ने गरी तयारी ।फेरी सोचेँ सानो टेन्ट झोल पदार्थ खानेका लागि मात्र होला । भनेपछि म छिर्ने ठुलो टेन्ट नै होला भनिँ अन्तिम निस्कर्स निकालेँ । तर नजिक जाँदै गर्दा मानिसका अनुहार जति प्रस्ट हुँदै गए मेरो केहि छ्यण अघिको सोचाइको बाँध चर्किँदै गयो र भेल सरी एक हुल प्रश्नहरुले मनको दहिलोमा बेस्सरी ढक्ढकाए ।
जब सधैँ मिस भन्दइ अँगालो मार्न दौडने ४ बर्षकी बिस्वकर्मा नानिसँग मेरा आँखा जुधे मेरो मनमा भक्कानो फुट्यो ।भगवानको रुप भन्छन हैन र बच्चालाई त ? तर ति निर्दोष हातले छोएको भात चल्दैन भनेर त्यो सानो टेन्ट बनाइएको रहेछ । निसासिएझैँ भएँ म । आँखा हुँदै छछल्किन लागेका भावलाई रोक्दै त्यो नानुलाई हेर्दै सोचेँ र मनमनै प्रश्न गरेँ “के तिमीलाई थाहा छ किन दुइ वटा टेन्ट लगाएका ?” ति निर्दोस आँखाले मेरो मनको प्रश्न बुझेझैँ एउटा मासुको चौटो दाँतमा च्याप्दै मुस्कुराउँदै भने, “हामी ले छोको अरुले खान हुँदैन रे मिस पाप लाग्छ रे अरुलाई । मलाई ममिले भन्नु भाको ।” त्यो एक दिनको दृस्यको याद आयो जब त्यही नानुले म पकाउने बेला भान्छाको ढोका निर बसेर म नि भित्र पस्न हुन्छ र भनेर सोदेकी थिइन । मस्तिस्कमा खैलाबैला मच्चियो । अचानक अकाशको गद्याङ गुडुङ सुन्दा लाग्यो आफुले आफुलाई सर्बस्रेस्ट प्राणिको अहोदा दिने र प्रकृतिको नियम मिचेर त्यस्तो अमानविय दृस्य सृजना गर्ने मानिससँग चिच्याउँदै बिरोध गर्दै थियो आकश तर अफसोच सुन्न मनिसलाई फुर्सद थिएन ।
हरेक रमझमको मोह मन बाट हत्यो । मासुको मोह मनबाट हट्यो ।वरपर हेरें दुइ गर्हा तल । सबै हाँसेर खाइरहेका थिए। दुखले पेलिएर निस्किएको हाँसो थियो कि त्यो परिस्थिति र समाजले बनाएर देखाइदिएको ऐना। प्रस्नको भुमरीमा रुमलिए म। दुई गह्रा तल मेरा विद्यार्थीका निर्दोस आँखा। दुइ गह्रा माथि लाइनमा ठेंलिदै टोलाइरहेकी म। अचानक ट्रेनिङ्गको याद आयो। दोश्रो दिन – हंगर ब्याङ्केट। निलो कार्ड पाएर भुइँमा बसेको दिन। म पनि खुशी थिँए। नुन, प्याज र निस्तो भात खाँदा म सबैसँग मिलेर गीत गाउँदै थिएँ। अनि रातो कार्ड पाएर कुर्चीमा बसी मासु र सुप खाने पनि आफ्नै धुनमा मस्त थिए।
भुइँमा बसेर निस्तो भात खाँदा कुर्चीमा बसेर मासु भात खानेको बिरुद्ध किन आवाज उठाउन सकिन होला मैले। किन यसै रमाएँ होला। क त्यो निलो कार्डले पनि मलाई समाज बनेर ऐना देखाइदिएको थियो ? लक्छ्मण रेखा कोरिदिएको थियो? जसलाई नाघ्न खोज्दा मेरो अस्तित्वमा प्रस्न उठ्ने थियो। के सानो टेन्टकाहरुले पनि त्यहि सोचेर रमाएर खान सकेका होलान ? के असमानताको भारीलाई घाँसको भारीलाई झैं सजिलै बोक्ने बानी पारिसकेका छन् उनीहरुले?
सोचै सोचमा डोहोरिंदै लाइनमा धेरै अगाडी पुगिसकेछु। निराशाका बादल लागेका आँखाले अरु खुसि अनुहारहरुलाई हेर्दै पाइला सार्दा सार्दै हातमा प्लेट लिएर कुर्चीमा पनि बसिसकेछु। तर गलामा अड्केको पीडाले भने भात निल्न दिएन। असान्त आँखाहरुले भौतारिदा भौतारिदै एउटा अनमोल दृस्य देखे। ठूला ठूला कधहरुको भिडलाई छिचोल्दै ति साना कद । मानिसको गुँडमा जन्मिएर पनि आकाश ताकिरहेका ति आँखा। ति आँखालाई देख्दा लाग्थ्यो तिनलाई समाजको पर्वाह छैन। पर्वाह छ त एक प्लेट खुसीको जसमा दुइ चौटा मिठास होस् र एक डाडु ठट्टा। र त्यसलाई निल्न एक गिलास हाँसो। ति ४ जाना मध्ये एक जना साथीलाई छोड्न नसकेर सानो टेन्टबाट भागेर आएको रहेछ। उ कदमा सबैभन्दा सानो भएपनी सबैभन्दा आँटिलो थियो । उ परिवर्तनको सम्वाहक थियो । मेरा आँखा मात्र उस्मा अडिएका थिएनन् ।वरपर हेरेँ धेरैका चिल नजर उस्लाई नै ताकिरहेका रहेछन् ।तर उ अघी बढ्यो ।केहि नसोची अघी बढ्यो । सबैको अगाडी अघी बढ्यो ।समाजले बनाइदिएको ऐना तोड्न अघी बढ्यो । उसले लक्ष्मण रेखा टेक्यो ।तर के आँखा झिम्किएको मात्र थियो लक्ष्मण रेखाको पछाडिबाट उसलाई कसैले तानेर त्यो रेखा नाघ्न दिएन । उ त्यहाँ देखा परेन । तर त्यो दिन असमानताको भिडलाई चुनौती दिदैँ परिवर्तनको झिल्को त्यहाँ पस्यो । समानताको एउटा किरँणले धर्ती छोयो । सोचेँ तिमी कहिल्यै हार नमान्नु अनि म पनि लागिपर्ने छु दिनदिनै तेस्ता जनसक्ती निकाल्न जसमा तिमी जस्तै आँट होस् अनि असमानताले सिर्जिएको अमानवताको समज ।
त्यस दिन देखी दुइ वटा प्रश्नहरुले गिज्याइरहेछन् ।शिक्षक भनेर सम्मानको ताज लगाइदिने समाजले यदी म दलित परिवारको छोरी भएको भए कुन टेन्टमा स्वागत गर्थ्यो होला?
चलनचल्तिको पट्टी आँखामा लगाइदिएर मुख चुप गराइदिन सक्ने शक्तिशाली समाजलाई परिवर्तन गर्न हामी कती शक्तिशाली बन्नुपर्ला ?
March 6, 2019	@ 9:00 am
Beautifully written my friend! Despite the experience of the hunger banquet we are compelled to keep quiet inacommunity that simply doesn’t understand the values of humanity.
March 7, 2019	@ 10:02 pm
Although the country has remarkable achievement in human rights, still there are many problems of dailt community that needs to be addressed. This is one of the example of rural areas. The burden of this type of stigma and discrimination is more in urban areas especially among the educated people. Subbechha sister you are the great that you started to reform it. I am proud of you and hope you will inspire other people of the dailt community to fight against this kind of social discrimination.
March 12, 2019	@ 5:11 am
यो परिस्थिति अझै छ र कहिले सम्म रहन्छ कुन्नि ?
मस्तिष्कमा धेरै कुरा छन तर पनि सुन्यता महसुस गर्दै छु ।
Keep it up and best wishes for your upcoming days.
LeaveaReply to Suman Sunar Close